Daafac Chelsea u ciyaara oo kashifay inuu wada hadal kula jira kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Barcelona. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Daafac Chelsea u ciyaara oo kashifay inuu wada hadal kula jira kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Barcelona.
Daafac Chelsea u ciyaara oo kashifay inuu wada hadal kula jira kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Barcelona.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-06-16 1:04 PM Ciyaaryahanka kooxda Chelsea cesar azpilicueta ayaa ka dhawaajiyey sida uu ugu faraxsan yahay in lala xiriiriyo kooxda Barcelona taas oo dooneysa iney lasoo saxiixato ciyaaryahankan xagaagan.
Barcelona ayaa wada hadal la bilowday cesar azpilicueta kadib markii ay ku fashilmeen baadi goobkii ay ugu jireen ciyaaryahanka kooxda Gunners ka Hector Belarin kaas oo ay doonayeen iney ku buuxiyaan booska uu baneeyey dambeedka midig Dani Alves kaas oo la filayo inuu ku biiro kooxda Juventus.
“Kooxaha waa weyn waxa ay had iyo jeer raadiyaan ciyaaryahanada sameeya bandhiga wanaagsan, anigana waxaan sameeyaa wax waliba oo karaankeyga ah inta aan ku jiro garoonka”cesar azpilicueta ayaa sidaas u sheegay Wargeyska Sport.
“Hada waxaan ahay ciyaaryahan u ciyaara kooxda Chelsea, mana garan karo waxa imaan doono mustaqbalka” Azpilicueta ayaa sidaas sii raaciyey hadalkiisa.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in qandaraaska uu kula jira ciyaaryahanka Spanish ka uu dhacayo xagaaga 2019 ka, balse waxaa macquul ah in kooxda reer London ay ku fasaxdo ciyaaryahankan hadii ay helaan qiimo ka sareeya 18 Milyan oo Euro.